China High ịrị elu ígwè azụmahịa ụlọ factory na-emepụta | Honghua
Structlọ ihe owuwu ụlọ a dị elu, nke anyị kpọrọ, bụ sistemụ bekee. Ihe nkwado a na-eme ka ahịhịa kwụ ọtọ na-eguzogide ngwongwo ndị isi na-ebu ụzọ bụrụ ndị na-ahụ maka ihe ndị na-eme ihe na-eme ka ha na girder, na-etolite weebụ nke vetikal vetikal, na ogidi ndị na-eme dị ka kọdr.
Pearl River Obodo Ọhụrụ
Mpaghara Mwube: 440000㎡
Pearl River New Town West Tower, elu ịrị elu ígwè azụmahịa ụlọ, Guangzhou International Financial Center, e meghere on October 15, 2010. islọ ahụ bụ 432 mita elu na nwere 103 floor.The ọdịda anyanwụ ụlọ elu e eze udo, nke bụ akụkụ nke ọrụ ọkụ maka egwuregwu Eshia.
Shapedị ụlọ elu dị n'ebe ọdịda anyanwụ dị ka "kristal transperent", ihe owuwu ahụ na-agbakwụnye usoro ihe owuwu rhomboid na-atọ ụtọ. Ngwongwo jupụtara na ígwè nwere nnukwu ihe mgbakwunye nwere nnukwu oghere, mgbidi mgbidi na-eme ka mgbidi sie ike nwere eriri dị n'ime ya, ala a na-ejikọkwa ígwè na-ejikọ tubes dị n'ime na n'èzí. izu ike zuru oke na arụmọrụ dị egwu. N'ihe banyere ihe mberede dị ka mmetụta na mgbawa, ọ ga-emebi emebi, ọ gaghị ebute mmeghachi olu ma daa, yabụ nchekwa nke usoro ahụ dị elu. Nnwale egosiwo na ụlọ elu ahụ nwere ike iguzogide octave nke obere ala ọma jijiji (ike nke mgbidi ala ọma jijiji na Guangzhou bụ ogo asaa), na omume ifufe na-otu narị afọ, ndị mmadụ nọ n'ụlọ elu ahụ agaghị enwe ahụ erughị ala. systemdị usoro ihe owuwu a bụ naanị nke ejiri n'ụwa.
Structlọ ihe owuwu ụlọ a dị elu, nke anyị kpọrọ, bụ sistemụ bekee. Ihe nkwado a na-eme ka ahịhịa kwụ ọtọ na-eguzogide ngwongwo ndị isi na-ebu ụzọ bụrụ ndị na-ahụ maka ihe ndị na-eme ihe na-eme ka ha na girder, na-etolite weebụ nke vetikal vetikal, na ogidi ndị na-eme dị ka kọdr. Ndị nkwado na-ekpochapụ ekwe na ogidi na ogidi. Ogwe osisi, ogwe igwe na ogidi nchara bụ ndị ụlọ ọrụ anyị mepụtara.
A na-eji ya arụ ụlọ nchara
Usoro a dabara adaba maka ụlọ obibi ọtụtụ na mpaghara dị ala ruo etiti.
oru oma na echekwa maka ime ka akwara isi na nguzogide usoro siri ike.
Usoro a na-enye ohere iji ndị isi gịrịgịrị na ụlọ.
Otu uru pụrụ iche nke osisi ejiri rụọ ya bụ na, enwere ike ikwughachi ya elu ụlọ ahụ yana akụnụba doro anya na imewe na ịgha ụgha.
Agbanyeghị, ọ nwere ike igbochi atụmatụ dị n'ime yana ọnọdụ ọnụ ụzọ na windo ya. Ọ bụ ya mere ọ ga-eji tinye ya n'ime ya na ahịrị nke mgbidi na nkewa.
Nke gara aga: Apartmentlọ ụlọ nchara dị elu